दुईको लागि एक मुस्कान। गर्भावस्थामा दाँतको स्वास्थ्य अनुसरण गर्नुहोस्
यो भनिन्छ कि बच्चाको जन्मले आमाबाट एक दाँत लिन्छ। दुर्भाग्यवस, अभ्यासमा धेरै महिलाहरू यस भनाइको न्यायलाई विश्वस्त थिए। यसबाहेक, वितरण पछि केहि पनि एक दाँत हराए, तर अधिक। तर यो रोक्न सकिन्छ।
गर्भावस्थामा, दाँत र साथीहरू प्राय: कष्ट भोग्छन्। गर्भमा जन्माउने बच्चाले "आमामा आमालाई लाग्छ प्रायः क्याल्सियम यसको शरीरमा आउँदैछ। यदि पोषक तत्वहरू पर्याप्त छैनन् भने, भविष्यमा आमाले राम्रो खाँदैन वा ऊ पखेटाको कमजोर पाखलालता छ, प्राय जसो उनका दाँत, न nails हरूले ग्रस्त छ। यसैले महिलाको शरीर गर्भावस्था, खनिज र भिटामिनसँग गर्भवती हुने र बच्चाको स्तनको भोजनमा भरिपूर्ण हुनु पर्छ।
भाषा सफा गर्नुहोस्। भाषाको सतहमा ध्यान दिन पनि आवश्यक छ, किनकि यसले प्यापिलारहरू (संवेदनशील, स्वाद, आदि) समावेश गर्दछ। तिनीहरू खानेकुरा प्राप्त गरेपछि छापाहरू मिलाउनुहोस्, जुन रोगजनक फ्लोराको विकासको लागि अनुकूल वातावरण हो। तसर्थ, जिब्रोको सतह दाँत सफा गरे दिन कम्तिमा2पटक सफा गर्नुपर्दछ। यसो गर्न, फार्मासीहरूमा भाषाको लागि विशेष ब्रश किन्नु पर्छ वा भाषाको लागि एक विशेष ब्रश किन्नु पर्छ, वा विशेष धुन।
फिट ठीक छ। ओमोस्ट्साटेट्सिरियन-स्त्री रोग विशेषज्ञको सिफारिसहरू अनुसरण गर्दै, तपाईं एकै साथ आफ्नै दाँतको ख्याल राख्नुहुन्छ, भविष्यको बच्चाको दाँतको बारेमा पनि। जे भए पनि, बच्चाको दाँतको गठन आमाको रगतमा क्याल्सियमको स्तरमा निर्भर गर्दछ। जबकि अभाव क्यारेनकी महिलाको दैनिक आहार मा क्याल्शियम र भिटामिन डीले उनको दाँतको राज्यलाई तत्काल प्रभाव पार्छ: एनमेन्डल घाइतेहरूमा पहेंलो दागहरू, proth को दाँत।
Permogenic Microflawlad नष्ट गर्दछ;
को विकासलाई रोक्छ;
सौदा प्रक्रियाको जोखिम कम गर्दछ।
गर्भावस्थामा, महिला जीवले सावधानीपूर्वक हेरचाहको लागि, विशेष गरी मौखिक गुहाको लागि चिन्ता गर्दछ। गर्भवती महिलाको प्रतिरोधकता कमजोर हुन्छ, यो रोगजनक सूक्ष्मजीवहरूको प्रभावहरूको जोखिममा पर्दछ। मौखिक गुहामा छन् माइक्रोबल्स यस अवधिको अवधिमा सक्रिय छन्, त्यसैले भविष्यका आमाहरू गम्भीर दन्त रोगको सामना गर्छन्। नर्कहरूको विकासलाई रोक्नुहोस्, अवधि अवधि, स्टारटोटिस र अन्य रोगहरूले गर्भावस्थाको क्रममा मद्दत गर्दछ।
प्रक्रियाको फाइदा के हो?
दन्त प ows ्क्तिको स्वामित्विक प ows ्क्तिहरू गर्वको समयमा विशेष महत्त्वको हुन्छ। हर्मोनल पृष्ठभूमिमा परिवर्तन हुँदा गेस्टेशनको अवधिमा परिवर्तनले दाँतमा सफ्ट स्भेवरेज गरिएको तथ्यलाई द्रुत रूपमा खनिज र दन्तन ढु stone ्गामा परिणत गर्दछ जुन यसको वरिपरिको दाँत र कपडाको जरा बदल्छ। प्रोफेशनल मौखिक गुहाको परोपकारीहरू गर्भावस्थाको बखत higgiene धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रदर्शन गर्दछ:
कहिले र कुन तरिकाले मौखिक स्वच्छताका गर्भवती महिला बोक्दछ?
हार्डवेयर सफा गर्ने डाक्टरहरू गर्भावस्था योजना वा दोस्रो त्रैमासिकमा प्रदर्शन गर्न सिफारिस गर्दछ।